Muqdisho: Wakiilo ka socda Baarlamanka Uganda oo la shiray gudoonka Baarlamanka Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com:Ku simaha Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Jeeylaani Nuur Iikar iyo xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa maanta Muqdisho ku qaabilay Wafdi ka socda Baarlamaanka dalka Uganda kuwaasi oo magaalada Muqdisho soo gaaray maanta.
Kulankan uu ku simaha Gudoomiyaha Golaha Shacabka ahna Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee Baarlamaanka Jeeylaani Nuur Iikar la qaatay wafdigan ka socda Baarlamaanka Dalka Uganda ayaa waxa uu ka dhacay xarunta Villa Hargeysa oo ay ku yaalaan xafiisyada Gudoonka iyo guddiyada Baarlamaanka waxaana goobjoog ka ahaa Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya.
Jeeylaani Nuur Iikar Ku simaha Gudoomiyaha Baarlamaanka oo hadal kooban ka jeediyey kulan qado sharaf ah oo Baarlamaanka Soomaaliya kusoo dhaweynayey Wafdigan ayaa ugu horeyn uga mahad celiyey Baarlamaanka iyo dowladda Uganda sida hagar la’aaneed ee ay ula shaqeeyaan islamarkaana u garab istaageen Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
“Waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta qaabilno wafdi ka socda Baarlamaanka Uganda oo ah Baarlamaan uu naga dhaxeeyo iskaashi iyo wadashaqeyn iyo wax wada qabsi” ayuu yiri gudoomiye ku xigeenka baarlamanka Soomaaliya Jeylaani Nuur.
Gudoomiyaha gudiga Difaaca Baarlamaanka dalka Uganda, Horn Fungaroo Kaps Hassan oo wafdigan hogaaminayey oo isna dhankiisa kulanka ka hadlay ayaa uga mahad celiyey Gudoonka iyo Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya sida ay magaalada Muqdisho ugu soo dhaweeyeen waxaana uu intaa ku daray in Baarlamaanka Uganda uu mar walba u garab taaganyahay Baarlamaanka Soomaaliya,tanina ay qeyb ka tahay wadashaqeynta Labada Baarlamaan.